Ciidamada dowlada Ciraaq iyo xoogaga Kurdiyiinta oo ku sii siqaya magaalada Mowsil - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada dowlada Ciraaq iyo xoogaga Kurdiyiinta oo ku sii siqaya magaalada Mowsil
Ciidamada dowlada Ciraaq iyo xoogaga Kurdiyiinta oo ku sii siqaya magaalada Mowsil
October 17, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Xoogaga Peshmerga iyo ciidamada dowlada Ciraaq oo kusii jeeda magaalada Mowsil. [Sawirka: Reuters]
Baqdaad-(Puntland Mirror) Howlgal wadajir ah oo wadaqaadeen xoogaga Ciraaq iyo ciidamada Kurdiyiinta Peshmerga ayaa ka xoreeyay gacanta dowlada Islaamiga ah sidoo kale loo yaqiin (ISIS) deegaan 200 km u jira magaalada Mowsil ee dalka Ciraaq, sida uu sheegay madaxweynaha Kurdiyiinta ee Ciraaq Masoud Barzani.
Barzani ayaa bayaanka sameeyay maanta oo Isniin ah, iyada oo ay socdaan howlgalo culus oo lagu xoreynayo magaalada labaad ee dalka Ciraaq ugu weyn ee Mowsil, taasoo gacanta kooxda hubaysan ku jirtay tan iyo 2014-kii.
“Maanta waa uu isbadalay dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Tani waa markii kowaad oo ay xoogaga Peshmerga iyo ciidamada Ciraaq ay iska-kaashadeen ayna isku meel ka dagaalameen,” ayuu yiri Barzani oo shir jaraa’id ku qabtay meel u dhow Mowsil.
“Waxaanu ku rajo weynahay in howlgalkan uu guulaysan doono Mowsil-na la xoreyn doono. Laakiin maahan taas macnaheedu in argagixisada ay dhamaatay.” Ayuu ku daray madaxweynaha.
Mowsil ayaa ah magaalo qani ku ah saliida waxayna caasimad gobol u tahay gobolka Nineveh.
Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hir-Shabeelle oo doortay madaxweynahoodii kowaad
Puntland oo xustay sanadguuradeeda 21-aad ee dowladnimo
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland oo ah dowlad goboleed katirsan Somaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah xustay sanadguuradeeda 21-aad ee dowladnimo. Dabaaldega ugu weyn ayaa lagu qabtay caasimada Garoowe, halkaas oo ay kasoo qaybgaleen masuuliyiinta Puntland iyo [...]
Somali military court sentences Al-Shabab member to death over Mogadishu truck bomb
Mogadishu-(Puntland Mirror) A military court in Mogadishu on Tuesday sentenced Al-Shabab member to death penalty for Mogadishu truck bomb, the court chairman Hassan Nuur Shuute announced. The court also sentenced two men to prison, while two [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland oo la dhaho Cabdiqaadir Faarax Bootaan ayaa ku dhaawacmay qarax gaari oo ka dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo galabta oo Arabaco ah, sida ay sheegeen saraakiishu. Xildhibaan Bootaan ayaa dhaawacmay kadib [...]